मन्त्रिपरिषद विस्तार अाज, मन्त्री बन्नेमा क–कसकाे चर्चा ? - HAMRO YATRA
मन्त्रिपरिषद विस्तार अाज, मन्त्री बन्नेमा क–कसकाे चर्चा ?
काठमाडौं, १० साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार नसकिएका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मंगलबार विस्तार गरिने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार दाहाललाई फोन गरी मंगलबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने जनाएका हुन् । आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा देउवाले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने वचन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा धेरै ढिलाई भएको भन्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीका निर्वाचित भएको डेढ महिनापछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। देउवा जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए भने जेठ २४ गते आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए। कांग्रेसबाट तीन, माओवादी केन्द्रबाट तीन र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट एक गरी देउवाले आठ सदस्यी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए। आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको करिव डेढ महिनापछि देउवाले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका हुन्।
कांग्रेसभित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई ५, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता खुमबहादुर खडका पक्षबाट एकएक जना भागबन्डाका आधारमा मन्त्री बनाउने तयारी देउवाको छ। पौडेल पक्षबाट बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी, सरिता प्रसाईं, बद्री पाण्डे, कमला पन्त लगायतको नाम चर्चामा छ। यसअघि मन्त्री र राज्यमन्त्री भइसकेकालाई दोहोर्यादउन नहुने दबाब पौडेल पक्षमा छ ।
सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधान र खड्का पक्षबाट मोहनबहादुर बस्नेतलाई मन्त्रीमा पठाउने तयारी छ । देउवा पक्षबाट भरत शाह, मीन विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, भीष्म आङदम्बे, अर्जुन जोशीलगायतको नाम चर्चामा छ ।
माओवादी केन्द्रबाट गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा खनाल, टेकबहादुर बस्नेत, सीता नेपालीलगायतको नाम मन्त्रीको लिस्टमा समावेश भएको चर्चा छ । फोरम लोकतान्त्रिकले भने यसअघि नै मन्त्री भएका जितेन्द्र देव र गोपाल दहितलाई पठाउने भएको छ। कांग्रेसबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ६ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट २ समेत गरी सोमबार १८ मन्त्री थप गर्ने तयारी देउवाले गरेका छन् ।